China Cooling Water Chiller N'ogbe Nrụpụta na Factory | Binuo
Ihe na-eme ka mmiri dị jụụ bụ compressor, condenser, evaporator, valve mgbasawanye, mgbapụta mmiri na-ekesa, usoro njikwa ọkụ eletrik na etiti. Isi ihe dị iche n'etiti mmiri jụrụ oyi na ikuku jụrụ oyi bụ condensers, nke mmiri jụrụ oyi chillers na-ejikarị shei na tube okpomọkụ Exchangers na elu ike arụmọrụ.
Binuo Mechanics nwere nkwado ogologo oge yana ndị na-emepụta mmiri jụrụ oyi nke ọma. Anyị na-ekerịta teknụzụ na azụmaahịa maka mmeri-mmeri. Ya mere, Binuo Mechanics nwere ike imeju ihe onye ahịa chọrọ maka mmiri na-ekpo ọkụ, dị ka ndụmọdụ imewe, ụdị nhọrọ, ire ere na mmezi.
Igwe mmiri jụrụ oyi na-eji shei na tube evaporators gbanwere okpomọkụ n'etiti mmiri na refrigerant, na usoro refrigerant na-amịkọrọ ibu okpomọkụ nke mmiri iji mepụta mmiri oyi. A na-ebute okpomọkụ ahụ na shei na tube condenser site na refrigeration compressor na mgbanwe n'etiti refrigerant na mmiri, nke mere na mmiri na-amịkọrọ okpomọkụ na-ewepụ okpomọkụ si na mpụga ụlọ elu jụrụ site na pipụ mmiri.
Ikuku jụrụ oyi chiller na-aṅụ gas dị obere okpomọkụ na obere nrụgide refrigerant mgbe ikuku refrigeration site na compressor, ma na-atụgharị ya n'ime okpomọkụ dị elu na ikuku dị elu na condenser, mgbe ahụ, a na-eme ka gas dị jụụ n'ime okpomọkụ nkịtị na mmiri mmiri dị elu site na ya. condenser. Mgbe mmiri mmiri na-abanye n'ime valvụ mgbasawanye ọkụ, a na-agbanye ya na uzuoku mmiri dị ala na nke dị ala ma na-asọba n'ime shea na tube evaporator iji nweta okpomọkụ nke mmiri oyi ma belata mmiri ọkụ. A na-ekuba ihe refrigerant nke kpochapuru azụ n'ime kọmpụta gaa na okirikiri refrigeration ọzọ.
1. Ọdịdị dị mfe na ntinye dị mfe;
2. Ọrụ ahụ na-enwe nghọta ma dị mfe na usoro njikwa akpaka, ma kwụsie ike na ntụkwasị obi
3. Nnukwu mgbanwe mgbanwe okpomọkụ;
4. Ọnụ ala ọdịda, obere mkpọtụ na ogologo ndụ ọrụ;
5. Njikwa okpomọkụ ziri ezi;
6. Nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi;
Nke gara aga: Ikuku Compressor ahaziri
Osote: Osisi Nitrogen Generator PSA na-ahazi nri
Ọgbọ ike hydrogen, Psa Nitrogen osisi, Holtec Nitrogen Generator, Atlas Copco Ngp, Hydrogen na Oxygen Generator, Psa Nitrogen,